Hutano - Bezzia | Bezzia
La utano Iwo zvirokwazvo ndiwo munda wakakoshesesa muhupenyu uye mune zvakajairika mazwi unobatanidzwa nevamwe sekugara zvakanaka, kuenzanisa kana kusavapo kwechirwere. Nekudaro, sekureva kweWorld Health Organisation, inotaura nezvayo senyika yekuzara hutano hwepanyama, mupfungwa uye mumagariro.
KuBezzia tinotsaurira chikamu kune ino musoro uye mairi, tinobata nemisoro senge zvirwere, matipi ekuva neutano kana kuonda. Nemisoro iyi, tinoda kupa ruzivo kuitira kuti vanhu vazive nezvekukosha kwekuzvitarisira, kudya zvakanaka kana kurovedza muviri, asi zvakare simbisa kukosha kwekushandisa aya matipi mukushandisa.
Tinovimba kuti pano iwe unowana kurudziro yekutarisira hutano hwako.
Maitiro ekutsungirira atopic dermatitis nekuuya kwematsutso
kubudikidza Toñy Torres inoita 18 maawa .
Nekusvika kwematsutso kunouyawo matambudziko emwaka senge atopic dermatitis. Dambudziko reganda rinokanganisa ...
Varicose mutsinga mumakumbo, matipi mashanu ekuzvidzivirira
Varicose veins kana varicose veins mitsipa inozowedzeredzwa, kuwedzeredzwa, uye kumonyoroka pasi peganda. Chero mutsinga we ...
Kurovedza bhodhoro remvura
Saka saka hautaure kuti haugone kudzidzira kumba usina michina! Nekuti iwe unogara uchifanira kuikanda ...
4 matekiniki ekuwedzera kuzviremekedza
Kuzvida pachako kunofanira kugara kuri kweumwe munhu rudo rwekutanga. Kuda iwe kwakakosha, ndiko ...
Kudzidzira kuratidza muviri wese kumba
Mararamiro anochinja, vanhu vanoenderana nemamiriro matsva uye vanotsvaga dzimwe nzira dzekuramba vachirarama ...
Chickpea furawa: Iwo mabhenefiti uye makuru mazano ekuishandisa
Wakatove wakabatanidza hupfu hwechickpea mune chako chikafu? Chokwadi ndechekuti isu tinogara tichitsvaga dzimwe nzira dzeku ...
Kuonda hakuna kufanana nehutano
Kuonda kunowanzoenderana nekuve noutano uye izvi zvakaipa zvachose uye zvinogona kukonzera zvakakomba ...
Chii chinonzi premenstrual syndrome?
Premenstrual syndrome inoreva kuwanda kwezviratidzo zvine chekuita nekuenda kumwedzi. Hunhu hwakajairika uye hunhu ...
Kana zvasvika kune zvinovaka muviri uye chikafu, haugone kutaura kuti zvese zvakanyorwa. Nekuti, nerombo rakanaka, mazuva ese anoitika ...
Nhasi kupfuura kudzidziswa mukati mako, isu tichaenda kunotorwa nhevedzano yekurovedza muviri kana kutambanudza ku ...
Maitiro ekuita kuti nguva yako idonhe nekukurumidza
Maitiro ekubvisa zvinorwadza mazino?
Magnesium carbonate chishamiso chemuviri wako
Maitiro ekuita yakanaka yekudzikisa massage nhanho nhanho
Sequelae weBulimia uye Anorexia
Chii chinonzi panic attack?